Kabary am-panambadiana - Takila Malagasy
Kabary am-panambadiana (Kabary Malagasy)
Mpanoratra: Kabary Malagasy
Nitsidika : 163
Sokajy: Kabary Malagasy
Ny masoandro hono raha hiposaka, mandefa ny tarany, ny varatra raha hipoaka, hialohavan’ny tselatra, ary izaho kosa raha hiteny, tsy maintsy manao ny azafady, eto anoloanareo mianakavy vory sy manatrika etoana. Tsy sanatria hanitsaka aho vao hanao mbay lalana, na handona vao hanao ala safay, fa tsy maintsy hisava ny raviny aloha ahitàna ny fotony, hisava ny lalana aho ahitana ny hodiavina ary manao azafady alohan’ny itenenana.
Raha hiteny eto anatrehanareo tompoko, dia tena mahasadaikatra sy mahamenatra, tahaka ny mitafy lamba eo imason’ny tompony,na ny lango eo imason’ny vary. Tsy hafa aho ity fa tahaka an’ilaikely nanambady antitra, tsy nahazo toa mai-molotra, rehefa nahazo toa menatr’olona, ka toa tsy hita izay holazaina, toa tsy ahita horesahina tahaka an-dRampiasabe, ka isaky ny miteny dia tsisy vaovao.
Tsy izany kosa nefa Tompokolahy sy Tompokovavy, ny atsanga no tonga eny an-tanimbary hono natosiky ny riaka, ny omby matoa tonga any am-bala, noroahin’ny mpiandry, ary izaho matoa mitondra ny fitenenana; notsofin’ny fianakavina rano. Tsy tehína mialoha andriana aho akory, na kintana mialoha johary, na nify lava hialoha ny molotra, fa tahaka ny vato ihany, ka ny maivana atoraka, toy ny antsy ka ny maranitra adidy, ary toy ny tanana, ka ny malady havanana. Tsy sanatria anefa hihambo ho tsara feo toy ny jorery, ny hira lavareny nefa ny mpijery tsy misy na tamingany iray aza, na hanao toa andRainiebo mangata-bady, ny fipetsopetson’ny vava mahalafo am-pitsanganana nefa rehefa atonina, toa vanja tsy mipoaka, afo tsy mirehitra, lasan-ko vavany fotsiny tahaka ny haron-tabebaka.
Noho izany Tompokolahy sy Tompokovavy, dia manao azafady eto anatrehanareo, ary loha-laharana amin’izany ianareo ray aman-dreny lolohavina an-tampon’ny loha. Ianareo ireo no tendrombohitra manerinerina, ka tsinjon’ny maso avy hatrany, tahaka ny hazo avo, ka arahabain’ny rivotra mialoha; hiteny eto anatrehanareo ka manao azafady.
Toy izany koa ianareo zoky ray aman-dreny, zoky be toa ray, ianareo izao no sinibe hiankohofan’ny siny; ho fenoina ny rano antoky ny aina; ary zokibe hiankohofan’ny zandry, omena anareo feno ny haja sy ny voninahitra, hiteny eto anatrehanareo ka manao azafady.
Manarak’izany mitodika aminareo vehivavy loharano nisehoana izahay, izay tsy hafa fa tatamo ravaky ny farihy, sahondra ravaky ny vato,
mandeha ravaky ny lalana, mitoetra ravaky ny tokantrano. Tsy azo atao rano dikain’ny zinga hianareo, na atao ambany maso tsy hita, satria angady nananana hianareo ary vy nahitàna, hiteny eto anatrehanareo ka dia manao azafady.
Ireo ianareo mitovy saranga amin’ny tena, izay kinga sy mahay lavitra noho ny tena, isika izao no toy ny zaza kambana, tao an-kibo isika no niaraka, fa rehefa nivoaka kosa, ianareo lasa aloha, koa ny taloha dia taloha ihany. Tsy hamingana anareo toa an’i Jakoba izahay; na sanatria hanohitra ny indray mihira aminy tahaka ny akoholahy fataka, fa hanaja anareo toy ny omby iray zioga, mijanona ianareo ekenay, mandeha ianareo arahinay, miteny hianareo hankatoavinay. Hiteny eto anoloanareo ka dia manao azafady.
Tsy sanatria adino ianareo zandry mahaleo mahalasa, jerena fa kely fa itoeran’ny hery, heverina fa bitika fa omban’ny tanjaka. Raha hifanala hazakazaka isika, ianareo lasa aloha, ary raha hifaninana amin’ny saina, ianareo nahita fianarana. Raha ny taona indray no jerena, izahay mihazakazako-antitra, fa ianareo mihazakaza-ko tanora, koa manan-jara raha samy manan-jara ianareo, fa ny masoandronareo mamiratra, ny herinareo vory nofo, ary ny tanjakareo tsy manam-paharoa, ny fahaizanareo manginy fotsiny. Hiteny eto anatrehanareo ka dia manao azafady.
Farany, tsy sanatria hanao kely tsy mba mamindro na odian-tsy hita tahaka ny tono vomanga vory vahoaka, ny zaza sy ny voatavo tsy mifandraka rehetra. Ianareo no kolokolo dimbin’ny vary, solofo dimbin’ny ala, ary olombelona antoky ny ho avy. Manan-jara raha samy manan-jara ianareo rankizy, raha mandeha babena, raha noana fahanana, raha mitomany omena vatomamy, hajaina sy andrianina ianareo satria zaza. . Fa tsy mba toy izany izahay lehibe, raha mandeha mibaby, raha noana mbola mitady vao mihinana, ary raha mitomany tsy misy mamafa ranomaso. Koa sambatra raha sambatra ianareo. Hiteny eto anatrehanareo koa dia manao azafady!
Izay no ela, tompokolahy sy tompokovavy, ela tsy maintsy nodiavina, lalana tsy maintsy lalovana. Na maika toy inona aza hono, ny ravitoto tsy mba fitetika, ny sinibe tsy enti-mantsaka ary ny azafady tsy maintsy volanina. Koa rehefa, voasava ny ranonando, mazava ny lalan-kombàna, rehefa lasa ny loha-masinina, manaraka ho azy ny vagon, ary rehefa vita ny azafady, mandimandina ny molotra hiditra amin’ny resaka manaraka…
Koa dia misaotra anareo Tompokolahy, mankasitraka anareo Tompokovavy!
(Isaorana: Andriamatoa RANDRIANARISOA Jean Aimé)
Midira aloha vao mametraka hevitra
Concept and Design © Serasera.org: Eugene Heriniaina
Page rendered in 0.1037 seconds